General Xuud: Laba cadow isma dugsato, hana dhaafaan Hirshabelle | Dhacdo
Home Wararka Maanta General Xuud: Laba cadow isma dugsato, hana dhaafaan Hirshabelle
General Xuud: Laba cadow isma dugsato, hana dhaafaan Hirshabelle
General Abuukar Xaaji Warsame (Xuud) oo ka tirsanaa Saraakiishii hore ee Militariga Somaliya ayaa hadda hoggaaminaya jabhadda laga aasaasay Gobolka Hiiraan, ee mucaaradada ugu weyn kala horjeeda Madaxweynaha cusub ee Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe).
Daba-yaaqadii bishii hore ee November waxaa deegaanka Ceelgaal ee duleedka Magaalada Beledweyne looga dhawaaqay Jabhadda HLF (Hiran Liberation Front), ka dib doorashadii 11-kii bishaasi ka dhacday Magaalada Jowhar, laguna soo doortay Cali Guudlaawe. Jabhadan waxaa hoggaaminaya General Abuukar Xaaji Warsame.
Jananka ayaa si lama fillaan ahayd waxaa Sabtidii loogu arkay Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan, sababo ku aadan isagoo magaalada bannaanka ka joogay, tan iyo markii jabhadaasi lagu dhawaaqay.
Jananka oo la hadlay BBC, waxna laga weydiiyay asbaabaha uu u tagay Beledweyne ayaa yiri “Beledweyne waxaan ka doonay odayaashii nabadoonada ee reer Hiiraan ayaa ii yimid, oo iga codsaday inaan kulano Wasiirka Arrimaha Gudaha, waan ka ogolaaday, ka bacdi waxay dhaheen wixii qodobo aad rabtay iyo sidaad u rabtay ee jabhadda u rabtay ama bulshada eer Hiiraan aad u rabtay soo qoro, waan is weynay Wasiirka, laakiin dokumentigii oo qoraal ah markaan ka soo tagaayay ayaan u dhiibay dad, waana loo gaynayaa Wasiirka.” Ayuu yiri General Abuukar Xaaji Warsame.
Muxuu yahay waxaad rabtaan oo warqadaasi ku qoran oo la weydiiyay ayaa yiri “Waxaa ku qoran kooxda sheeganeysa Hirshabelle in ay ka baxdo gobolka.” Gobolkee oo la weydiiyay ayaa ku jawaabay “Gobolka Hiiraan. Waxa uu intaa ku daray “Anaga ma magacaabin, ma dooran, waxay noola jooggaan waa dulmi iyo is aamin-darro, taasna waxay keeni kartaa isku dhac, anagoo ka fiirsaneyno weliba dhac, sida aan u sahli lahayn inaan u sahalno. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa laba cadow isma dugsato. Marka waxaan ku iri hana dhaafaan nimankaas.”
Su’aal ahayd inay diidan yihiin Madaxda Hirshabelle ka socoto ee ku sugan Magaalada Beledweyne oo la weydiiyay ayaa wuxuu ku jawaabay “Aan diidanahay inay jooggaan.”
Su’aal kale oo ahayd waxa ay isku tilmaami karaan isaga iyo maleeshiyada uu ku uruursanayo Ceelgaal oo la weydiiyay ayaa waxaa uu yiri “Anaga dad nabadgelyo, dad xaq u dirira, dad la dhacay oo diidan wixii laga dhacay ayaan nahay.”
Waxa la’idinka dhacay oo idinka maqan oo la weydiiyay ayaa yiri “Waxa nalaga dhacay waxa waaye Hirshabelle afartii sano ee hore xaq laguma dhisin, afartaan sanana 10 jeer ayadoo la sii laba jibaaray xaq darradii ayaa haddana lagu dhisay. Sidaa daraadeed ayaa anaga ku diidnay fekradaas ay Nabad iyo Nolol ku dhistay Hirshabelle.”
General Xuud oo la weydiiyay in isagoo Janan Soomaaliyeed ah uu wax ku raadiyo jabhad reer ku dhisan, isla-markaana uu dowlad-diid noqdo sida uu u arko ayaa kaga falceliyay “Waa khalad, dowladnimana ma diidani, reerkeyna keliyana maaha waa reer Hiiraan oo dhan. Waan kulansanahay, waxaana diidanahay waa xaq darro, waa sharci darro, waa wixii uu ballanqaaday Madaxweynaha xilligii uu doorashada ku guuleystay uusan fulin. Reer Hiiraan inay tashtaan ay isku gaystaan waxooda, oo waxa lagu yaqaano Dowladda Federaalka ee caburinta ah waxa looga bixi karo ee ah inaanciidan sameysano, anagoo cidna ku dileyn.”
General Xuud ayaa intaa ku daray “Ciidan qaran maba jiraba, ciidan qaran xaguu jiraa? Puntland ciidankeeda ayay haysataa, waqooyi ciidankooduu haystaa, anagana ciidankayagaa haysanaa. Xaqiiqada runta ah ciidamada nin afartan sano soo ahaa baan ahay, ninkaad rabto oo Sarkaal oo ciidan ah weydii. Ma jiro Somaliya ciidan qaran oo ka kooban gobolada oo dhan.”
Si kastaba ha-ahaatee Beledweyne waxaa Jimcihii ka dhacay iska horimaad hubeysan iyo bannaanbaxyo looga soo horjeeday safar lagu waday in uu ku taggo Madaxweynaha Hirshabelle, safarkaasi ayaana la baajiyay, ka dib kulan uu Wasiirka Arrimaha Gudaha magaaladaasi kula qaatay Odayaasha Dhaqanka ee Gobolka Hiiraan.
Previous articleTaliska Danab oo ka hadlay ka bixitaanka Ciidamada Mareykanka ee dalka
Next articleFarmaajo oo Puntland & Jubbaland ugu baaqay in ay Guddiyada soo magacaabaan